Git Sangit News » छाती के कारणले दुख्यो ? यसरी जानौं,
छाती के कारणले दुख्यो ? यसरी जानौं,
छाती दुख्नु मुटुकै समस्याले हो भन्ने धेरैको बुझाइ पाइन्छ । तर, यो बुझाइ गलत हो भन्छन् चिकित्सक । मुटुबाहेक फोक्सो, हड्डी, मांसपेशी, नसा र छालाका कारणले पनि छाती दुख्ने गर्छ । तर, मुख्यतः मुटु, फोक्सो, हड्डी तथा मांसपेशीले छाती दुख्ने बढी हुन्छन् ।
छाती के कारणले दुख्यो भनेर कसरी थाहा पाउने ? मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले दिएका छन्, जवाफः मुटुको दुखाइ छातीको बीच भाग वा दायाँ बायाँ एकनासले दुख्ने, दबाब महसुस हुने तथा पोल्ने गर्छ भने यो मुटुको दुखाइले हुने गर्छ । मुटुको दुखाइले छातीमा निम्तिने पीडाको तीव्रता कम या बढी हुन सक्छ । दुखाइसँगै पसिना आउने, बान्ता होलाजस्तो हुने, धड्कन बढ्ने, डर लाग्ने र कमजोर महसुस हुने लक्षण देखिएमा हृदयाघात नै हुन सक्छ ।
हृदयाघातमा छातीको दुखाइ देब्रेहात, घाँटी, दाँत वा पिठ्युँतिर पनि सर्न सक्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल भएकाहरूले यस्तो दुखाइमा बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ । फोक्सोको दुखाइ फोक्सोमा समस्या हुँदा छातीमा निम्तिने दुखाइ मुटुको समस्यामा भन्दा फरक खालको हुन्छ । यो अवस्थामा लामो श्वास लिँदा वा फेर्दा छातीको एकातिर (दायाँ वा बायाँ भाग) करङमा चसक्क दुख्ने गर्छ ।
दुब्लो व्यक्तिमा यो समस्या बढी देखिन्छ । फोक्सोको समस्याले छाती दुख्दा स्वाँ–स्वाँ हुने र ज्वरो आउने पनि हुन सक्छ । फोक्सोमा निमोनिया भएर पनि छाती दुखेको हुन सक्छ । यस्ता लक्षण देखिए जतिसक्दो छिटो जनरल फिजिसियन वा छातीरोग विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ । मांसपेशी वा हड्डीको दुखाइ छातीको दायाँ भाग, पछाडिपट्टि वा छेउतिर करङमा दुख्यो भने त्यो मांसपेशी वा हड्डीको दुखाइले हुन सक्छ ।
यो भागमा दुख्दा मुटुमा समस्या भएको सम्भावना भने कम हुन्छ । मांसपेशी वा हड्डीको दुखाइले छातीमा पीडा भएको वेला हातले छाती छाम्दा, श्वास फेर्दा पनि दुख्ने हुन्छ । छातीलाई घुमाउँदा दुखाइमा परिवर्तन आए मांसपेशी र हड्डीको दुखाइ हुनसक्छ । यो अवस्थामा हाडजोर्नी विशेषज्ञकहाँ जानु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १४ भाद्र २०७७, आईतवार १४:५७